မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း သိမ်းဆည်းခံမြေများမှ ၉၃၇၉ ဧကကို ဒီဇင်ဘာလ မကုန်မီ ပြန်လည်ပေးအပ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သိမ်းဆည်းခံမြေများထဲမှ ၉၃၇၉ ဧကကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမကုန်မီ ပြန်လည် ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၏ ဒုတိယတစ်နှစ်တာသက်တမ်းကာလအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောသည်။
”မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့အစိုးရ ရဲ့ မူဝါဒကိုက မြေကို ပြန်ပေးချင်လို့ အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ထားတာပါ။ တစ်လတစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးနဲ့ စစ်ဆေးပြီးတော့ ပြန်ပေးနေတာ။ ဒီဇင်ဘာ မတိုင်ခင်မှာ စွန့်လွှတ်ထားတဲ့မြေတွေထဲက ၉၃၇၉ ဧက ပြန်ပေးမှာပါ”ဟု ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောသည်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည် ပေးအပ်မည့် မြေယာ ဧက ၁၆ဝဝဝ နီးပါးရှိရာ ဧက ၆၄ဝဝ ကျော် ပေးအပ်ပြီးသည်။ ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမတိုင်မီ ၉၃၇၉ ဧကကို ပြန်လည် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြေယာမှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေများ စိစစ်ရေးကော်မတီ ဗဟိုသို့ တိုင်ကြားထားသော တိုင်ကြားစာ ၈ဝ၇ စောင်ရှိသည့်အနက် ၃၉၇ စောင် ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်ကာ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးကြောင်းနှင့် တိုင်းသို့တိုင်ကြားစာ ၆၉ဝ စောင်ရှိသည့်အနက် ၄၁၆ စောင် ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သဖြင့် ရာခိုင်နှုန်း ၆ဝ ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။
ဟန်ဆောင်မှု လွန်ကဲနေသည့် ဘရာဇီး တိုက်စစ်မှူး နေမာ၏ အပြုအမူအပေါ် ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လျက်ရှိ
နိုင်ငံတကာမှ ဖိအားပေးခံနေရသည့် ရခိုင်အရေးကို တိုင်းရင်းသား အားလုံး အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်ြ
ထိုင်းကုမ္ပဏီ၏ ကတိချိုးဖောက်မှုကြောင့် မြဝတီတွင် သောင်တင်နေသော အလုပ်သမား ၉၀ ကျော်ကို နစ်နာေ??
မြန်မာနိုင်ငံ၏ logistics cost သည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်ဟုဆို